Mareykanka iyo Kooxda Daalibaan ayaa laga yaabaa in ay ku heshiiyeen qorshe ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan Afqaanistaan, ilo qarssoodi ah ayaa sidaasi u sheegay VOA-da maalintii Sabtida ee shalay. Taas beddelkeeda, ayay kooxdan fallaagada ah xaqiijisay in kooxo argagixiso oo caalami ah aan loo oggolaan adeegsiga ciidda Afqanistaan si ay halis u galiyaan Mareykanka ama wadan kale mustaqbalka.
Fahamka waa natiijada ka soo baxday ku dhowaad muddo hal todobaad ah oo wada hadal aad u adag oo aan kala go lahayn oo magaalada Doxa ee dalka Qadar ku dhexmaray Maraykanka iyo wakiillada kooxda mucaaradka ah. Wakiillo ka socda dawladda martida loo yahay iyo Pakistan ayaa iyaguna ka qayb qaatay kulanka.
Ilo-wareedyo ayaa u sheegay VOA inay rajeynayaan in labada dhinac ee wada-xaajoodka ku jira ah inay ku dhawaaqaan qorshaha ka soo bixista ugu dambeyn maalinta Isniinta, haddii ay wax kasta ku socdaan sida la qorsheeyay.